Madaxweynaha Puntland iyo Wefti uu Hogaaminayo oo Lagu Soo dhoweeyey Qardho (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland iyo Wefti uu Hogaaminayo oo Lagu Soo dhoweeyey Qardho (dhegayso)
Seteembar 18, 2018 5:47 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 18 Sep 2018 safar shaqo kusoo gaadhay degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar.
Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa inta aanay soo gaadhin magaalada Qardho waxa ay ku hakadeen gaadhi xamuul ah oo ku dhacay wadada inta u dhexaysa degaanka Dalsan iyo degmada Dangorayo, Madaxweynaha ayaa loo xaqiijiyey in aanay wax khasaaro nafeed ah ka dhalanin shilkaasi, balse ay jiraan khasaare hantiyeed, waxa uu amray Madaxweynuhu in sida ugu dhakhsaha badan looga qaado wadada gaadhiga maadaama uu ku xaniban yahay wadada badhtankeeda.
Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa waxaa degmada Qardho kusoo dhoweeyey maamulka gobolka karkaar, kan degmada Qardho, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dowladda Puntland, isimo, waxgarad, aqoonyahano, siyaasiyiin iyo shacab tiro badan oo ka qayb qaatay soo dhoweynta Madaxweynaha iyo weftigiisa.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii uu soo gaadhey guhada magaalada Qardho waxa uu soo kormeeray cisbitaalka weyn ee magaaladaasi, kaasi oo uu ku socdo dhisme, dhismehaas oo Madaxweynaha Dowladda Puntland uu dhagax dhigay sanadkii lasoo dhaafay ee 2017.
“Waxaan mahadballaadhan u jeedinayaa maamulka iyo shacabka gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Qardho soo dhoweyntooda ay marwalba nagu qaabilaan, waan ku faraxsanahay inaan idinku soo booqano cisbitaalka guud ee Qardho ee gobolka Karkaar, maamulka waan bogaadinayaa runtii shaqo wanaagsan ayey qabteen, cisbitaalka Qardho wuxuu ka mid yahay cisbitaalada ugu wanaagsan Puntland, waxaa ka socda shaqo wanaagsan oo ay u qabtaan guud ahaan gobolka iyo inta ku hareeraysanba” ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa xusay in dhismaha cibitaalku u socdo si wanaagsan, loona dhisay si tayo iyo masuuliyadi ku jirto, isla markaana waxa uu tilmaamay Madaxweynuhu in cisbitaalka lagu baahi bixi doono in ka badan 30 ka sano ee soo socota.
Dhinaca kale Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa balan qaaday in ay dowladdu gacan weyn ka geysan doonto dhammaystirka cisbitaalka, qalabayntiisa iyo tayayntiisa si ay shacabku uga helaan adeeg wanaagsan. Ugu danbayn Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weftiga balaadhan ee uu hogaaminayo ayaa safar shaqo oo taariikhi ah ugu waajahan degmada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir oo kulan waddatashi ah la qaatay Hay’addo